Wararka Maanta: Arbaco, July 11, 2012-Kulan looga hadlayay Xoojinta Ammaanka oo Maanta lagu qabtay Degmada Balcad ee Gobolka Shabeellada Dhexe
Kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda CCD ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan dowladda, maamulka gobolka Shabellaha Dhexe kuwaasoo dadka degmadaas ku nool ku boorriyay inay qayb ka qaataan xoojinta ammaanka.
Gudoomiyaha degmada Balcad Cusmaan Maxamed Maxamuud (Xaadoole) oo hadal ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in markii Al-shabaab laga qabsaday degmada ay dadka ku nooli ka qaybqaadanayeen sidii nabadda lagu adkeyn lahaa.
"Degmada waxaa ka jirta nabad, waxaana qayb ka qaatay dadka ku nool oo dhexda u xirtay in deegaankooda ay nabadeeyaan. Ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM ee iskaashanaya ayaa iyaguna suurogeliyay in degmada laga saaro Al-shabaab," ayuu yiri Cusmaan Xaadoole.
Sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabellaha Dhexe, Yuusuf Cabdi C/lle (Yuusuf Jaalle) oo isaguna hadal jeediyay ayaa sheegay in degmada Balcad ay ka mid tahay degmooyinkii laga xusay madaxbannaanida Soomaaliya lagana taagay calanka Soomaaliya, isagoo tilmaamay inay muhiim tahay in dadka deegaanka ay ka qayb-qaataan howlaha maamulka, ammaankana ka shaqeeyaan.
Jen. Maxamed Maxamuud Saney oo ka mid ah saraakiisha ciidamada DKMG ah ee ku sugan degmada Balcad ayaa sheegay in ammaanka ka jira degmada Balcad uu aad u wanaagsan yahay.
"Degmada Balcad waa degmadii u horreysay ee laga saaro Al-shabaab oo ku taalla gobolka Shabeellada dhexe, waxaana rajeynaynaa in sidoo kale dhawaan laga saari doono Al-shabaab degmooyinka ay ka mid yihiin: Jowhar, Mahadaay, Aadan Yabaal, Raage Ceelle iyo Cadale," ayuu yiri Jen. Maxamed Saney.
Sheekh C/qaadir Soomow oo ku hadlayay afka Ahlusuna ayaa sheegay in shacabka Balcad loo baahan yahay inay is garab-taagan ciidammada qalabka sida, isagoo ka mahadceliyay guulaha ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM gaareen.
Gudoomiyaha Maxkamada degmada Balcad, Sheekh Cusmaan Xiddig oo isaguna ka hadlay kulanka ayaa sheegay in qofkii dil geystay la marsiin doono sharciga Islaamka laguna fulin doono xukunkii u soo baxa.
Degmada Balcad ayaa waxay noqonaysaa degmadii labaad oo ay hay'adda CCD ku qabto kulan looga hadlayo ammaanka iyadoo maalin ka hor kulan noocan oo kale ah ku qabtay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose.